ज्ञानगुनका कुरा Archives » aarthikplus
अमिर लामा (संवाददाता ) काठमाडौं,१३ भदौं । भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँशी पर्व आज वैदिक सनातन धर्मावलम्वीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृकार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर–घरमा भित्र्याएर मनाउँदैछन्। शास्त्रोक्त विधिअनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा......
यी हुन्, शिक्षक लाईसेन्स परीक्षाको लागि उपयोगी नमुना वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरु
काठमाडौँ, साउन १०। शिक्षक लाईसेन्सको तयारी गरिरहेकाहरुको लागि सम्भावित प्राथमिक तहको विभिन्न विषयहरुको लागि उपयोगी हुने बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस खण्डमा ४० अंक १ अंकभारका दरले ४० वटा प्रश्नहरु......
काठमाडौं, २९ असार । नेपालमा हिन्दु धर्मग्रन्थ अनुसार चन्द्रग्रहणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिने भए पनि यसको मान्यता भने धेरै किसिमको पाइएको छ । भोलि लाग्ने चन्द्रग्रण भोलि सोमबार राती सवा १ बजोबाट शुरु भएर......
यसरी गर्नुस् शिक्षक सेवा आयोगले लिने अन्तर्वार्ताको तयारी
अन्तर्वार्ता भनेको उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रियालाई थप वैधता दिने अभिप्रायले विशेष रूपमा आयोजित औपचारिक कुराकानी हो । लिखित परीक्षाले मात्र उम्मेदवारको व्यक्तित्व र सक्षमताका विभिन्न पक्षहरूलाई प्रकाश पार्न नसक्ने भएकाले अन्तर्वार्ता लिइन्छ । अन्तर्वार्तालाई......
अब मोबाइल एप मार्फत वैदेशिक रोजगारीबारे जानकारी लिन सकिने
काठमाडौंं, असार १७ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना मोबाइल एपबाट पनि पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारी एप’ ल्याएको छ । यो एपबाट विदेश जानुअघि र विदेश पुगेपछि ध्यान दिनुपर्ने......
जानी राखौः महिनावारी भएको कति दिनमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ?
एजेन्सी, असार १२ । महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको......
लोकसेवा आयोगको परिक्षा यसरी तयारी गरे भइन्छ सफल (परिक्षामा ध्यानदिनुपर्ने कुरा र महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उत्तर सहित)
काठमाडौं, जेठ २१ । नेपाली युवा जमातको सपना हुन्छ– लोकसेवामा नाम निकालेर सरकारी जागिर खाने । नेपालमा निजामती सेवाको बढ्दो आकर्षणसँगै लोकसेवामा प्रतिष्पर्धा झन्–झन् कठिन हुँदै गएको छ । सेवा प्रवेशका लागि योग्य बन्न......
चाहना भएपनि पहिलोपटक सहवास गर्दा युवतीहरु तर्सिने यस्तो छ कारण
काठमाडौं, जेठ २० । युवतीहरुलाई सहबास गर्न इच्छा, चाहना भए पनि उनीहरु सहवास गर्न एकदमै डराउँछन् । सहवास गर्दा तिनीहरुलाई केही गर्ने आँट वा हिम्मत नआउने, आफसे आफ आत्मबल घटेर जाने हुन्छ जसले गर्दा......
यी हुन्, नेपालमा सत्ता परिवर्तन गराउने चर्चित दरबार हत्याकाण्ड
काठमाडौ, जेठ १९ । विश्वको इतिहास हेर्दा लगभग सबैजसो देशमा सत्ताका लागि दाउपेच, छलकपट, लडाइँझगडा र काटमार भएको पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीको आरम्भ भएपछि जनताबाट चुनिएर जानेहरू सत्तामा पुग्दा पनि सत्ताधारीबीच पदप्रतिष्ठाका लागि दाउपेच हुने......